सरकारले कोरोना रोकथामको लागि देशैभर ७ हजार शैया थप गर्दै - Sarbochcha Media
सरकारले कोरोना रोकथामको लागि देशैभर ७ हजार शैया थप गर्दै
May 2, 21 12:26 pm
काठमाडौँ, १९ वैशाख । सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि करिब सात हजार शैया थप गर्ने भएको छ।
जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका ६ अस्पतालमा आजैदेखि १ हजार शैया थप गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले सरकारी र निजी अस्पतालमा थप ७ हजार शैया थप्न थालिएको जानकारी दिए।
ती अस्पतालमा शैया थप गर्न मन्त्रालयले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको थियो। सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र किष्ट मेडिकल कलेजमा ४००/४०० दरका एक हजार २०० शैया चाँडै बन्ने बताएको छ।
मनमोहन मेडिकल कलेजमा ३००, खरिपाटीमा २५०, पाटनस्थित मानसिक अस्पतालमा २५, पाटन अस्पतालमा ३५०, वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ५००/५०० र जनमैत्री अस्पतालमा १२० शैया बन्ने भएको छ ।
सम्झौतानुसार निजी अस्पतालले दुई हजार शैया बनाउने उनले बताए। हाल मुलुकभर १८ हजार ९१७ शैया रहेको छ ।